Ahoana ny fomba famakiana Baiboly hahalalana azy ▷ arangi️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana ny fomba famakiana Baiboly hahalala azy. Betsaka ny fomba famakiana ny Baiboly hahafantarana azy. Na izany aza, ny olona tsirairay dia tsy maintsy ampifanaraho amin'ny fahalalanao ny vakiteninao ny soratra masina.
Noho izany, miankina amin'ny ambaratonga misy anao dia manolotra sosokevitra vitsivitsy izahay aiza no ahafahanao manomboka mahatakatra izany tsara.
1 Ahoana no famakiana Baiboly hahalalana azy: Dingana voalohany
2 Amin'ny lamina inona no tokony hamakiako Baiboly?
2.1 1. Raha io no ifandraisanao voalohany amin'ny Baiboly:
2.2 2. Raha te hampitombo ny fahalalanao ankapobeny momba ny Baiboly ianao:
2.3 3. Boky hovakiana amin'ny fotoana rehetra:
2.4 4. Boky raha mandroso bebe kokoa ianao:
3 Function manamora na manokana ny famakian-teny
Ahoana no famakiana Baiboly hahalalana azy: Dingana voalohany
Ahoana ny fomba famakiana Baiboly hahalala tsara azy
Alohan'ny hanombohanao dia apetraho amin'ny tenanao ity fanontaniana ity: “¿Inona no fantatro momba ny Baiboly? ". Na dia tsy mamaky azy aza, ny olona sasany dia nihalehibe nahare tantara avy ao amin'ny Baibolyfa ny hafa tsy mba nanana an'io fifandraisana ifotony io miaraka amin'ny Tenin 'Andriamanitra. Amin'ny toe-javatra manao ahoana ianao?
Atombohy amin'ny fisafidianana ny Baibolinao. Tsy tamin'ny Espaniôla no nanoratana ny Baiboly, ka nadika. Betsaka ny fandikan-teny amin'ny teny espaniola, manomboka amin'ny tranainy indrindra, amin'ny fiteny arkeolojia kokoa, ka hatrany amin'ny moderina kokoa, nefa henjana. Azonao atao ny misafidy azy amin'ny haben'ny paosy na amin'ny dikanteny efa lany ary misy fanazavana eo am-pototry ny fehintsoratra.
Manapaha hevitra hoe ohatrinona ny fotoana azonao manokana manokana isan'andro. Raha fohy ny fotoanao dia mamakia toko iray na roa isan'andro. Raha manam-potoana bebe kokoa ianao dia afaka mamaky bebe kokoa. Ny Baiboly dia boky misy atiny ara-panahy, koa ilaina koa ny maka fotoana kely hivavahana ary hiezahana hahatakatra izay vakinao.
Ny Baiboly taratasy rehetra dia misy Índice eo ambony. Ka raha tsy fantatrao izay misy ny boky ao amin'ny Baiboly dia tadiavo ilay pejy ao amin'ny index. Araraoty ireo loharano ananan'ny Baibolyo.
Amin'ny lamina inona no tokony hamakiako Baiboly?
Tsy mitovy amin'ny boky hafa ny Baiboly. Raha ny marina dia fitambarana boky 66 izay mitambatra amina karazana literatiora (ara-tantara, tononkalo, faminaniana, evanjelika, epistolary ...) fa tsy amin'ny filaharana famakiana na amin'ny filaharana araka ny fotoana. Ka ho an'ireo vao manomboka, tsy tsara ny manandrana mamaky fonon-takotra.
1. Raha io no ifandraisanao voalohany amin'ny Baiboly:
Atombohy amin'ny iray amin'ireo filazantsara efatra avy amin'ny Testamenta Vaovao:Mateo, Marcos, Lucas na Juan. Ireo olona efatra ireo dia nanoratra ny tantaram-piainan'i Jesosy, izay samy manana ny fomba fijeriny. Iray amin'ireo boky ireo hasehoko anao hoe iza i Jesosy, ny mpandray anjara lehibe amin'ny Baiboly.
Asan'ny Apostoly manisa ny tantaran'ny nananganana ny fiangonana taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Mety ho boky mahaliana ity vakio aorian'ny iray amin'ireo filazantsara.
Para mahatakatra bebe kokoa momba ny fiainana Kristiana, afaka mamaky boky vitsivitsy ianao aorian'ny Asan'ny Apôstôly, toa ny Romana na Tesaloniana. Ireo boky ireo dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny famonjena sy ny maha samy hafa ny fiainana aorian'izany. Dingana tsara izy ireo hahazoana fahalalana fototra momba ny filazantsara.
2. Raha te hampitombo ny fahalalanao ankapobeny momba ny Baiboly ianao:
Atombohy amin'ny famakiana ireo boky ara-tantara ao amin'ny Testamenta Taloha, manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Estera. Ireo boky ireo tantarao ny famoronana izao tontolo izao ary hanampy anao hahafantatra ny fomba fiasan'Andriamanitra mandritra ny tantara izy ireo. KOA mitantara ny tantaran'ny olon'ny Isiraely sy ny anjara asany amin'ny drafitr'Andriamanitra izy ireo.
Aorian'ny famakiana ireo boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly, dia tsara ny mamaky ny bokin'ny Hebreo, ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tadidio fa ny sasany amin'ireo boky ara-tantara dia mitantara tantara miverimberina, saingy amin'ny fomba fijery samihafa.
Ireo bokin'ny faminaniana (manomboka amin'ny Isaia ka hatramin'ny Malakia) milaza ny fomba nampitandreman'Andriamanitra ny olona momba ny zavatra hitranga. Raha manapa-kevitra ny hamaky ireo boky ireo ianao, dia tsara ny manandrana mamaky azy ireo ara-potoana ary mitady ny toe-javatra ara-tantara alohan'ny hamakiana ny boky tsirairay.
Ny bokin'i FAMINANIANA ao amin'ny Testamenta Taloha sy ny bokin'i apocalipsis, mety ho tena izy ireo sarotra takarinar. Aza manahy anefa. Na ireo mpakafy Baiboly hendry indrindra aza dia sahirana amin'ny famakiana ireo boky ireo!
3. Boky hovakiana amin'ny fotoana rehetra:
Ny bokin'i Salamo sy ohabolana Mahaliana sy mampientam-po izy ireo vakina amin'ny fotoana rehetra, na firy na firy ny fahalalanao ny Baiboly. ny tononkalo sy hira ny salamo tena marina amin'Andriamanitra ary ny bokin'ny ohabolana dia misy maro torohevitra feno fahendrena amin'ny fiainana andavanandro.
4. Boky raha mandroso bebe kokoa ianao:
Hira: tononkalo momba ny sandan'ny fitiavana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ireo.
MPITORITENY: taratry ny tsy maha-zava-poana ny zava-drehetra tsy misy Andriamanitra.
Job: dia boky iray izay manadihady ireo fanontaniana sarotra indrindra momba ny fijaliana, nefa tsy manome valiny mora.
Function manamora na manokana ny famakian-teny
Ireto ohatra etsy ambony ireto dia sosokevitra vitsivitsy fotsiny hamakiana Baiboly. Afaka manao izany koa ianao mitadiava drafitra famakiana amin'ny Internet na amin'ny boky, izay mety mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao.
manandrana miresaka amin'ny pretra, pasitera na olona manam-pahalalana bebe kokoa amin'ny Baiboly. Ity olona ity dia afaka manampy anao hamorona drafitra tsara ho anao ary hamaly ny fanontanianao rehetra.
Raha mandeha any am-piangonana tsy tapaka ianao, Hahafantatra bebe kokoa momba ny Baiboly sy ny fampiharana azy eo amin'ny fiainanao ianao. Ny fiangonana dia vondrona olona iray izay niaiky ny filan'izy ireo hiaraka hamaky, hianatra ary hahatakatra ny Baiboly.
Misy ihany koa loharano maro an-tserasera sy anaty boky, toy ny Fampaherezam-panahy isan'andro, hevitra, boky torolalana Baiboly, sns.. hanampy anao hahafantatra tsara kokoa ny lahatsoratra ao amin'ny Baiboly, toy ny rakibolana, sarintany, fampahalalana momba ny tantara sy ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany. Raha tsy mianatra ianao dia satria tsy tianao izany!
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahalala ity lahatsoratra ity ny fomba famakiana Baiboly hahalalana azy. Raha izao dia te hahalala ny antony nahatonga an'i Jesosy nanozona ny aviavy, manohy mizaha Discover.online.